जानीराखौ ! तपाईले गरेको काम बि’ग्रने र अ’सफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिल्यै अ’सफल हुनु पर्दैन । – Sandesh Press
जानीराखौ ! तपाईले गरेको काम बि’ग्रने र अ’सफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिल्यै अ’सफल हुनु पर्दैन ।
November 28, 2020 233
३. लक्ष्यमा पुग्न आफूले कति बाटो हिड्न बाकी छ भन्दा पनि कति बाटो हिडिसके भनेर सधैभरी ख्याल राख्नहोस् । यसले एकातर्फ आफूले गरेको मेहनत सम्झाउँछ भने अर्कोतर्फ लक्ष्यमा पुग्न थप उर्जा र प्रेरणा दिन्छ ।४. मानिसलाई सफलताको लागि पैसाको पनि आवश्यकता पर्छ । आफू सँग भएको पैसा सधै सही ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
५. सधैभरि आफूलाई बुझ्ने र सहयोग गर्ने साथीहरुको माझमा मात्र बस्नुहोस् । परिवारसँग खुलेर रहनुहोस् । मनमा कुरा गुम्साएर नराख्नुहोस् ।६. आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र सधै त्यसमा कठिबद्द भएर लाग्नुहोस् ।७. डरलाई सधैभरि जित्नुहोस । म सफल बन्दिन, यो काम गर्न सक्दिन, ममा खुबि र दक्षता नै छैन, म अरुजस्तो छैन भन्ने भावनालाई आजैदेखी टाढा राख्नुहोस् ।
८. धैर्यशिल रहनुहोस् । एक रात मै सफल हुन सकिदैन भन्ने तथ्य बुझ्नुहोस् र लगातारको मेहनतले नै सफलता देखाउने हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् ।९. धेरै सोचेर र प्लान गरेर नबस्नुहोस् । कुनै काम गर्नु छ भने त्यसलाई तरुन्तै सम्पन्न गर्नुहोस् ।१०. सधै खुल्ला सोच राख्नुहोस् । जीवनमा सफलता पाउन धरै बाटाहरु रहेको तथ्य नभुल्नहोस् ।
एउटा बाटोबाट फेल भए अर्को बाटो पहिल्याउनुहोस् ।त्यसैले नयाँ काम सुरु गर्नु अघी सबैभन्दा पहिले र ठुलो कुरा भनेको राम्रो आइडिया हो । राम्रो आइडिया पाउन निम्न आठ कुराको ध्यान दिनुहोस ।प्रयास गर्नुहोस, तर न’डराउनुहोस : मनमा जे आइडिया आउछ त्यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याउनुहोस तर पारीणाम सँग नडराउनुहोस । यसरी नै सफल आइडिया आउछ ।
Prevमहाबिर पुनले गण्डकी प्रदेशलाई दिए “कोरोनाको स्वाब संकलन गर्ने गाडी”
Nextकोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटेका न्युयोर्कको अस्पतालमा कार्यरत नेपाली डाक्टरको नि’धन